Kumuu ahaa ciyaartooygii Itoobiya kasoo baxsaday ee ku biiray xulka qaranka Soomaaliya? - BBC News Somali
Kumuu ahaa ciyaartooygii Itoobiya kasoo baxsaday ee ku biiray xulka qaranka Soomaaliya?
Image caption Abuukar Isloow iyo Maxamed Cabdullaahi oo ka mid ah ciyaartooydii hore
Taariikhda marka ay tahay 14-ka bishan waxaa dalka Ruushka ka furmaya koobka adduunka ee kubadda cagta, balse waa dhacdo kale oo caalami ah oo aysan Soomaaliya ka muuqanin meel ka mid ah.
Haseyeeshee taasi micnaheedu ma ahan in taariikhda isboortiga Soomaaliya ay sidaas mugdi u tahay, waxaana dalka soo maray waayo lagu magacaabo Waayihii Dahabiga ahaa.
Waxaaba jira jiil dhan oo aanan xusuusanin wax aan ka ahayn beryihii garoomada ciyaaraha la buux dhaafin jirey casar dheer, shatiyada lagu galana la dhamaysan jiray maalmo ka hor ciyaarta.
Waxaa lasoo maray xilli magacyada ciyaartooyda Soomaalida ay taageerayaasha funaanada ku xardhadaan, xifaaltanka kooxahana uu ahaa mid aad u sareeya.
Garsoore kubbada cagta oo Muqdisho lagu diley
Dadka aadka u xusuusta xilligaas, kana soo saftay qaar ka mid ah kooxihii jirey iyo waliba xulka Qaranka waxaa ka mid ah Abuukar Isloow Xasan oo BBC-da u waramay "Waxaan ciyaaraha kasoo qeybgalay ciyaaraha sanadkii 1975-tii, waxaan ku biirey kooxdii Jeenyo, waxaan u saftay ciyaarihii gobolada, gobolka Banaadir, kadibna kooxdii madbacadda ayaa deyn igu soo qaadatay, dhawr ciyaarood ayaan usoo saftay, waxaan usoo noqday kabtanka kooxda, waxaan usoo qaaday koobka horyaalka, kan Jeneraal Daa'uud".
Ciyaartooy kaliya ma uusan soo noqon ee sidoo kale heerar kale ayuu gaaray "Madbacadda waxaan kasoo noqday macalin iyo macalin ku xigeen, iyo maamulba".
Abuukar waxa kale oo uu xusuustaa xilligii uu u saftay xulkii Qaranka Soomaaliya "Ciyaarihii Carabta 1979-kii ayaan ka mid noqday kooxda qaranka".
Maxamed Cabdulle Faroyare ayaa isna ka mid ah ciyaartooydii hore ee Soomaaliya, wuxuuna yiri "Aniga oo 11 sano jir ah ayaa la ii qaatay koox, kadib ciyaar ayaan u aadnay Shabeelada Hoose, 1981-dii ayaan u saftay kooxda Dowladda Hoose, sanadii 1987-diina waxaan ku biirey xulka Qaranka, kadibna waxa aan jeclahay in xulkii Qaranka ee ugu dambeeyay uu ahaa".
Waxa uu lahaa hiigsi iyo himilooyin fog sida uu Maxamed ugu waramay wariyaha BBC-da ee Muqdisho Ibraahim Maxamed Aadan "Himiladeenu waxa ay ahayd in aan heer caalami ah ka ciyaarno, ana waxaan ka mid ahaa kooxdii qarka u fuuley in ay rumeeyaan, sheeko waxaa jirta ay dadka aad u xusuustaan, dalka Nigeria ayaa halkan nagaga badiyay, goolkana anaga ayaa iska dhalinay, haddii aan badin lahayn waxaan aadi lahayn koobka adduunka ee 20 jirada oo Chile lagu qabanayay ayaan ka qeybgali lahayn".
Waxaan weeydiinay ciyaartooyda uu is leeyahay waa ay u gudbi lahaayeen heer caalami, wuxuuna ku jawaabay "waxaa ka mid ah Khaliif Riikoow, Muriidi Aba Nuur, Cabdullaahi Salaan, Shaashi, Shaakir, Cabdullaahi Cabdi".
Haddaba maxay ahayd sababta ciyaartooyda Soomaalida ee sidaasi xirfadda kubadda u leh ay uga qeybgali waayeen ciyaaraha caalamiga ah?
Waxaa su'aashaas ka jawaabaya Abuukar Isloow "Waxaa jiray ciyaartooy lagu magacaabo Ismaaciil Giriile oo Xulka Itoobiya usoo dheeley, una qaaday koobka Afrika, balse markii dambe usoo baxsaday dhanka Soomaaliya, kooxda qarankana ku biirey, kooxo badan ayaa soo codsaday, balse ciyaartooyda Soomaalida looma ogoleyn in ay dalka ka baxaan".